Ugu Weyn Ee Berry
Honeysuckle la cuni karo: baro siraha koritaanka
Dhamaanteen waan xasuusannaa sheekada "tufaaxa", laakiin yar ayaa og in dabeecadda ay leedahay "elixir dhalinyarada". Waa miro yar oo aan caarad lahayn, waxaana lagu magacaabaa Honeysuckle. Xagee laga helaa isbarbardhigaasi? Honeysuckle la cuno ayaa leh qadar macquul ah oo ka mid ah guryaha faa'iido leh. Berriga waxaa jira waxyaabo dhif ah oo dabiiciga ah - selenium, oo dhalinaysa unugyada jidhka.
Isticmaalka Honeysuckle, faa'iido iyo waxyeelo u leh jirka bini'aadamka
Honeysuckle - geed geed, geedo buluug ah oo miro-ballaaran. Waqtigan xaadirka, waxaa jira ilaa 190 noocyo la yaqaan. Intooda badani waxay ka yimaadaan dalalka Aasiya. Qodobkani, waxaan ka fakareynaa honeysuckle daroogo oo lagu aqoonsanayo dhammaan hantida faa'iidada leh iyo ka hortagga geedkaan.
Blackberry Thornfrey: faa'iidooyinka, faa'iido darrada, xajmiga iyo daryeelka
Blackberry waa subgüsus of reer Rubus ee qoyska Pink. Berry leh maskaxda waa mid aad u la mid ah raspberries bogsashada. In Europe, BlackBerry ma koraan, laakiin in America waa mid ka mid ah berry ugu haboon. Khamriga laga soo bilaabo Mexico waa hooyo, dhammaan dalagga waxaa loo dhoofiyaa Maraykanka iyo Yurub. In our dalkeenna, baadiyaha berry ku koraa ee duurka, laakiin thanks to dhismaha bogsiinta iyo dhirta, blackberry ayaa si caan ku ah beeraha guriga.
Cayayaanka Blackberry: ka hortagga iyo xakamaynta
Kordhinta, milkiilayaasha dhulka iyo guryaha cagaaran ayaa bilaabay inay koraan madow. Taabashadani dilka ah waxay bixisaa miro iyo casaan leh midab-madow. Miraha waxaa ku jira walxo badan oo faa'iido leh. Horumarinta madowgu waa geedi socod badan oo wakhti go'an ah. Warshad kuleyl ah oo jecel ma aha mid dhicis ah, waxay u nugul yihiin cuduro badan, iyo cayayaanka badan oo kaliya waxay adkeeyaan daryeelka dhirta.
Qodobbada waxtarka leh ee BlackBerry: isticmaalka daawada dhaqameed iyo iska horimaadyada
Casiir macaan iyo caano ah ayaa ka yimid Maraykanka waxayna ku faafeen dalal badan oo adduunka ah. Intii lagu guda jiray hawsha ballaarinta, waxay ku guulaysatay inay la qabsato xaaladaha kala duwan ee cimilada, waxaana hadda loo adeegsadaa qaybo badan oo dunida ka mid ah. Isticmaal kuma koobna uun cunidda. Blackberry waxay leedahay saameyn ku daweynta jirka bini'aadamka.
Xeerarka abuurista iyo daryeelidda cagaarshowga sare ee "Giant"
Blackberry waa xayndaab aad u badan oo ka soo jeeda qoysaska Rosaceae, oo ku sii kordhaya waqooyiga iyo dhul-dari ee Eurasia, xayawaanka qulqulaya, wabiyada fatahay, iyo, ku filan, beerta iyo beerta. Ma taqaanaa? Blackberry ma aha oo kaliya quruxda dibadda, laakiin sidoo kale faa'iido jirka. Casiirka Blackberry ayaa kaa caawin doona in la yareeyo heerkulka, bioflavonoids ku dhex jira waxa caadi ah heerkulka jirka.
Noocyada ugu caansan ee madow madow
Qof kasta oo ku xanuunsaday dhiig ka hor waqtiga nadiifinta blackberries, ku farxi doonaa in uu beertiisa beerta this ka qoyska ka mid ah casaan, ka baxsan geedaha qodxan. Noocyada la soo bandhigay ee cagaarka aan cagaha lahayn ayaa kuu oggolaanaya inaad gashato goosashada qani ku ah, iyada oo aanad lacag badan ku bixinin nadiifinta lafteeda ama daryeelka dhir aan la qabin.
Hababka looxa goosashada jiilaalka
Cornel waa geed ama geedka gaaban, inooga soo guuray Caucasus waxaanay si dhab ah ugu dhufteen dalalka Ukraine, Moldova iyo Ruushka. Dogwood oo laga tarjumay Turki micnaheedu waa "casaan". Miraha midabka casaanka leh waxaa ku jira xaddi badan oo anthocyanins, vitamin C iyo pectin. Faa'iidooyinka Cornel qalalan Cornel waa kaydka nafaqooyinka iyo fitamiino.
Strawberry Fiktooriya: talooyinka ugu fiican ee beerashada iyo daryeelka
Waxaan kuu sheegi doonaa qarsoodiga ah ee beerto iyo daryeellidda strawberries "Victoria." Ka dib markaad iyaga barato, waxaad noqon doontaa beerta qurxoon ee fiican. Waa maxay farqiga u dhaxeeya "Victoria", strawberries iyo strawberries "Victoria" - waa magaca mid ka mid ah noocyada strawberry. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya strawberries iyo strawberries waa in strawberries koraan beeraha, iyo strawberries koraan kaymaha.
Doorashada ugu wanaagsan ee kala duwan ee blackberry jiilaalka jiilaalka
Noocyo jilicsan jiilaalka-adag ayaa aad loogu jecel yahay beerashada-guri-koray sababtoo ah dhadhankiisa, sifooyinka faa'iido leh, caabbinta dhaxan, cudurada iyo cayayaanka. Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan. Waxaan kuugu soo jeedinaynaa inaad ku aragtid fasalada ugu caansan ee barafka leh ee BlackBerry. Agave Kala duwanaanta madow ee ka badan boqol sano ka hor ayaa la soo saaray Maraykanka.
Blackberry Black Satin: Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada, haboonaanta iyo daryeelka
Blackberry waxaa iska leh jilibka rubus waana xubin ka mid ah qoyska casaan. Geedku wuxuu ku koraa waqooyiga iyo dhul-daaqsimeedka, ee kaymaha isku dhafan oo qallafsan. Inta badan duurka waxay ku koraan daadadka wabiyada, aagga kaynta-kore. Warshadu waxay bilaabmaysaa inay barareyso bartamihii Juun iyo dhammaadka bisha Agoosto. Hal baadiyaha waxaad ka heli kartaa ubax, berry oo cagaaran.
Noocyada ugu caansan ee dogwood
Sida caadiga ah, noocyada dogwood waxay leeyihiin cilad aad u fiican jawiga qaboobaha iyo caleemaha, waxayna u egtahay xaalad ah ciidda, taas oo noqon karta dhagax, nuurad, qallalan, iwm. Nidaamka cufan ee jilicsan, oo gaadhay qoto dheer oo mitir ah, wuxuu u ogolaanayaa inuu dogwood noqdo qoyaanka .
Ka hortagga, habka iyo hababka raspberry cayayaanka
Raspberries - dhaqanka berry jecel ee bannaanka u badan. Berry Juicy waa la qadariyaa ma aha oo kaliya dhadhanka u fiican, laakiin sidoo kale caan ku ah hantidooda faa'iido leh. Midhaha geedka faleebadu waxay leeyihiin waxyaabo ka hortag ah oo dabiici ah, saameyno qallayl, kor u qaadaan habka jidhka oo siinaya tamar, ka caawinta la dagaallanka diiqada. Si kastaba ha noqotee, beerashada guuleysata, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida si wax ku ool ah looga hortago cayayaanka raspberry.
Blackberry Chester Thornless: faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida kala duwan, beerashada iyo daryeelka
Cilmi-tumayaashu waxay soo saareen noocyada qalabka biraha ah ee blackberry, mid ka mid ah taas oo ah midka aan kala sooc lahayn ee kala duwan ee Chester Thornless. Waxay ka dhex muuqataa kuwa kale oo leh iska caabin badan oo leh qaboojiye fiiqan, iyo sidoo kale dhadhan fiican. Blackberry Chester Thornless ku dhacay jacayl la bannaanka u ah la'aanta qodax iyo berry ballaaran.
Qeexida noocyo kala duwan oo yoshta ah
Bannaanka beerta oo idil ma yaqaan magaca "yoshta". Dhawaan, dad badan oo beeralay ah-beeraleeyaal badan oo ku yaala dhulkeena ayaa xiiseynaya geedkan geedka, inkastoo gebi ahaan laftiisa lagu soo celiyey 80s. Waa mid soo jiidasho leh sababtoo ah dalagga ayaa laga goyn karaa muddo dheer qaybo ka mid ah - berry ayaa u daadi si aan caadi ahayn.
Kobcinta boodhadhka: beeritaanka iyo daryeelka
Blueberries ayaa muddo dheer lagu yaqaanay aagahayaga, laakiin qof kastaa maaha inuu ku kobciyo. Beerta qaar ayaa aaminsan in dhibaatada dhirta ay ka badan tahay dalagga soo baxay. Qaar kalena ma yaqaanaan sida ay u koraan. Waxaan rajeyneynaa in arrinkani uu qof walba ka caawin doono inuu si habboon u koro warshadda. Blueberry: sharaxaadda dhirta Blueberry waa geed caleemo yaqaan oo yaqaan 'genusum genus'.
Xeerarka taranta Yoshta: Talooyinka bannaanka
Loo soo saaray 30 sano ka hor, hybrid wuxuu sii wadaa inuu ku guuleysto qalbiyada beerta. In yoshte waxaa jira wax ka mid ah miro yar, laakiin halkii, waxay u eg tahay currants. Bacriminta ku dhowaad ma lumiyo cudur kasta oo fangas ah iyo cayayaanka iyada waxba. Si ka duwan currants, waxay ka kori kartaa xitaa gobollada oomane. Faa'iidada weyn ee Yoshta ayaa ah in berry ay u bislaadaan si aan siman lahayn, oo aanad u badnayn inaad hesho miraha khudradda goosashada.
Xulashada cuntooyinka ugu fiican ee ash buur buuran (chokeberry) madow-fruited jiilaalka
Caleemaha saboolka ah wuxuu joogi karaa geedka muddo dheer haddii shimbiruhu cunaan. Waxaa loo isticmaali karaa mid cusub, waxaadna ka dhigi kartaa noocyo kala duwan oo banaan. Ku saabsan sida geedka madow ee la goosto xilliga jiilaalka, maaddadeena xigta. Waqtiga ururinta berry of chokeberry Si aad isugu diyaariso dhadhan oo buuxiyey rajooyinka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato marka ay soo qaado soo bixin.
Sida loo koro aabaha: beerashada iyo daryeelka
Amiirku, sida dhaqanka beerta, ma yaqaanno dhammaan beeralayda casriga ah, taniyo xaaladaha dabiiciga ah ee waddamada waqooyi u dhow yihiin iyada. Si kastaba ha ahaatee, berry this si fiican u yaqaan in times wakhtigii Ruushka, markii loo isticmaalay in cuntada iyo sida daawo. Shuruudaha beeritaanka iyo doorashada meeleynta: Guryaha amiirada: guga - tobanka sano ee ugu horreeya May, dayrta - tobanka sano ee labaad ee Sebtembar.
Isticmaalka cloudberries: faa'iidooyinka iyo dhaawaca jirka
Морошкой называется многолетнее растение, встречающееся в торфяных болотах и топких лесах России и Беларуси, а также в тундре (полярно-арктический регион). Berry-casaan-bunni cas, leh magac la mid ah, waa cajiib leh faa'iido leh oo dhadhan fiican leh. Waxyaabaha kiimikada ah ee berry clouds Cloudberries waa hodan ku salaysan fiitamiinada iyo fiber.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Berry 2020